कालो अर्थतन्त्रभित्र लुकेका कुरा «
कालो अर्थतन्त्रभित्र लुकेका कुरा
अवैध धनलाई अवैध रुपमै प्रयोग गरिरहने संख्या पनि ठूलो छ ।
कतिपय ठाउँमा सेवा वा वस्तु बिक्री गर्ने पसल, कम्पनी, फर्म, होटल, रेष्टुरेन्ट, कम्प्युनिकेसन, ट्राभल, क्लिनिक, हस्पिटल, सप्लायर्स, कन्ट्रयाक्टर, सहकारी आदिको संख्या सेवा लिनेको भन्दा धेरै जस्तो देखिन्छ । नेपालमा यत्रा धेरै नाफामूलक बिजनेश किन सञ्चालन भएका देखिन्छन् ? यस लेखमा यसबारे खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।
कारोबारसमेत गर्ने र बोर्ड मात्रै टाँसेका बिजनेशको संख्या नै बढी देखिन्छ । दर्ता भएका बिजनेशको संख्या हे-यो भने झनै अस्वाभाविक देखिन्छ । औपचारिक संस्थाबिना नै कालो कारोबार गर्नेको संख्या यहाँ ठूलै छ । त्यसबाहेक संस्थाको समेत प्रयोग गरेर कालो, खैरो र सेतो पैसा मिसमास गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ ।
भारतीय र नेपाली नागरिकको बिजनेश छुट्याउन नसकिने गरी गाँसिएको हुन्छ भने चिनियाँको बिजनेशको आकार पनि ठूलै छ । सानादेखि ठूला बिजनेशसम्म यसरी सञ्चालन भएको देखिन्छ । यहाँ कमाएको पैसा भारतमा जम्मा गर्ने वा भारतमा कमाएको पैसा यहाँ जम्मा गर्ने सामान्य जस्तै छ । दोहोरो नागरिकता हुनेको संख्या लाखौं छ ।
यस्ता कारोबार विश्वभर हुन्छन् । तर, नेपाल र भारतको हकमा यसको हिस्सा निकै ठूलो छ । औपचारिक अर्थतन्त्रसँग तुुलना गर्दा ४० प्रतिशत यस्तो अर्थतन्त्र रहेको अर्थशास्त्रीहरु अनुमान गर्दछन् । जसअनुसार भारतमा छायाँ र कालो अर्थतन्त्रको आकार १० खर्ब डलर र नेपालको ८ अर्ब डलर रहेको देखिन्छ ।
कुनै बेला भारतीयले नेपालमा क्यासिनो खेलेर जितेको भनी कर तिरेर कालोधनलाई सेतो बनाउँथे । त्यस्तै, नेपालमा एकल वा संयुक्त व्यापार व्यवसाय गरी नाफा भएको देखाएर भारतमा आर्जन गरेको अवैध धनलाई वैध बनाउँछन् भन्ने आरोप पनि छँदैछ । यस्तै, नेपालीले पनि यहाँ अवैध आर्जन गरेको पैसा भारत वा तेस्रो मुलुक पु-याएर त्यहाँबाट यहाँ ससानो रकम ट्रान्सफर गरी वैध बनाउँछन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा सीमित प्रशासक र राजनीतिकर्मीले तेस्रो मुलुकमा लगेका छन् भने अधिकांशले भारतमा घरजग्गा, उद्योग व्यवसाय र बैंक बचतमा लगानी गरेका छन् । नेपाली आफैंले भारतमा सम्पत्ति किन्न सक्ने सुविधा त्यहाँको सरकारले दिएको छ । भारतीयले यहाँ घरजग्गामा भने लगानी गरेको पाइदैन ।
टिभी, मोबाइल, ल्याबटप, कम्प्युटर, ब्राण्डेड हिटर, माइक्रोओभन जस्ता विद्युतीय सामान र होम एप्लायन्सेसहरु करिब ३० प्रतिशत औपचारिक बिलबिना कारोबार हुने गर्दछ । लत्ताकपडा, हार्डवेयर समान, खेलौना, विद्युतीय सामान र होम एपलाइन्सका पार्टस्, मोटोर पार्टस, किराना, फुटकर आइटमहरु कति बिलबिना वा कति कम मूल्यांकनमा बिलिङ्ग हुन्छ भन्ने अनुमान नै गर्न सकिंदैन ।
उपभोग र विलासमा खर्च गर्ने धनलाई वैध बनाउन नै परेन, बचत गर्ने वा लगानी गर्ने सम्पत्तिलाई वैध बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले प्रतिव्यवसायी वार्षिक लाखौंमा हुने अवैध मुनाफालाई कुनै समस्या छैन, करोडौं मुनाफालाई लुकाउन वा वैध बनाउन भने मिहेनत गर्नुपर्दछ । त्यसो त अवैध धनलाई अवैध रुपमै प्रयोग गरिरहने संख्या पनि ठूलो छ ।
सपिङ कम्प्लेक्सहरु र सडक छेऊ सटर निर्माण गर्न जग नपुर्दै बुक हुन्छन् । बुक गर्न तिरिने सलामी रकम ६ महिनादेखि १ वर्षको भाडा बराबर हुने गर्दछ । जसले गर्दा बिजनेशको लागत अत्यन्तै उच्च हुन जान्छ । त्यहाँ बिजनेश गर्नेले आप्mनो नोक्सान असुल्न महँगोमा दोस्रोलाई बिजनेश बेच्ने मात्र विकल्प हुन्छ । एवम् रितले आफू ठगिने र अरुलाई ठगेर सन्तुलनमा आउने प्रवृत्ति हुन्छ ।
कतिपय फेन्सी पसलमा दिनभरमा एउटै ग्राहक नपसेको देखिन्छ । उसले एक हप्तामा एउटा ग्राहक आयो भने सयौं वा हजारौं प्रतिशत मुनाफामा सामान बेचेर लागत असुल्छ । उपभोक्तामा पर्याप्त सूचना नभएको वा बिक्रेतामा अधिक सूचना भएको अवस्थामा ग्राहक यसरी ठगिन्छन् । अर्थशास्त्रमा यसलाई एसिमेट्रिक सूचनाको प्रभाव भनिन्छ ।
कतिपय निजी ससाना हस्पिटलको आम्दानीको प्रमुख स्रोत गर्भपतन हुन्छ । १८ हप्ता नाघेको र गोप्य राख्नुपर्ने गर्भपतनका लागि त्यस्ता अस्पतालले ५ लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । त्यस्तो गर्भलाई हस्पिटलले लुकाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूला अस्पतालको फोहोर जलाउने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिसँग मिलेमतो गरिन्छ । त्यस्तै, सस्तो बेड चार्जमा बिरामी भर्ना गर्ने र पछि चिकित्सकहरुसँग मिलेर अनावश्यक अपरेसन वा वास्तविक लागतभन्दा महँगोमा अपरेसन गर्ने वातावरण मिलाई लाखौं असुल गर्ने गर्दछन् ।
नेपालको कानुन अनुसार नेपालीले यहाँको सम्पत्ति बिक्री गरेर विदेश लैजान पाउँदैनन् । तर अष्ट्रेलिया, अमेरिका र क्यानाडामा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र पाएका नेपाली प्रायः सबैले यहाँको सम्पत्ति बिक्री गरेर लगेकै छैन । हुण्डी कारोबार र यहाँबाट जाने नेपालीसँग पटके रुपमा थोरै थोरै डलर मगाएर उनीहरुले सम्पत्ति लगेका छन् ।
हुण्डी मात्रै गर्ने एउटा व्यवसाय त छँदैछ । साथै मनी ट्रान्सफर, मनी चेन्जर र सहकारी संस्थाहरुले समेत यो कारोबार गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा काम गरेर भारु ल्याउने नेपाली धेरै नै छन् । उनीहरुसँग १६५ को दरले भारु किनेर भारतमा लगानी गर्ने गरिन्छ । एउटै समूहको भारत र नेपालमा कारोबार हुने हुँदा यहाँ नेरु बुझ्ने र संकेत नम्बर लिएर भारतमा भारु बुझ्ने सेवा पनि यहाँ उपलब्ध छ ।
विश्वभरि नै छिटो र बढी धन कमाउन केही मानिसहरुले नैतिकता विपरीत अवैध कारोबार गरेको पाइन्छ । तर नेपाल र भारत जस्ता मुलुकमा इमान्दारपूर्वक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा अब्बल सावित भए पनि नाफा सुनिश्चित नभएका कारण समेत यस्ता व्यवसाय गरेका पाइन्छ । सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन, जसले गर्दा टोले गुण्डालाई सहयोग गरेर टाठाका गुण्डाबाट सुरक्षा प्राप्त गर्नु बिजनेशम्यानका लागि बाध्यता छ ।
पहुँचवाला व्यक्तिले कर छली गरेर मुनाफा गरिरहेका हुन्छन् । आफूले इमान्दारपूर्वक गर्दा जिविकोपार्जन हुँदैन । गुणस्तरीय सेवा र सामान बेच्ने, ठगी नगर्ने र व्यावसायिक सेवा दिनेलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । छिमेकी पसलेले अवैध व्यापारसँग मिसाएर कुनै सामन निकै सस्तोमा बिक्री गरेको हुन्छ, इमान्दारले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?
विभिन्न अवैध ढंगले आर्जन भएको धनलाई ग्राहकभन्दा बढी संख्यामा देखिने गरी खुलेका नाफामूलक बिजनेशमार्फत व्यवस्थापन गरिन्छ । घाटामा चल्ने बिजनेश वा कारोबार नै नहुने बिजनेशलाई उच्च नाफा देखाइन्छ । कालो वा छायाँ कारोबार गर्दैमा सबैले उच्च मुनाफा गर्छन् भन्ने हुँदैन । किनकि त्यस्तो बजारमै यहाँ तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । एउटै व्यक्तिले वैध र अवैध दुवै व्यापार गरेर आप्mनो मुनाफालाई सन्तुलन पनि गर्दछन् ।
सरकारले भारत वा अन्य देशमा जाँदा आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा साटेर लैजान पनि असहज स्थिति सिर्जना गरेको छ । विदेशमा आप्mनो सम्पत्ति लैजान वा व्यवसाय विस्तार गर्न रोक लगाएको छ । त्यसैले नेपालमा कालो र खैरो बजारको उपस्थिति निसन्देह ठूलो छ, जुन मुलुकको शान्तिसुरक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि राम्रो होइन । यसको कारण कारोबारीको गलत नियत मात्र नभई निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणको अभाव पनि हो ।
हिमाल आरोहणबाट आम्दानी
पछिल्लो पटक आएका समाचारका अनुसार यसपालिको वसन्त ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न आएका विदेशी
जैविक विविधता नै जिउने आधार
संसारको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ३१ प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको छ भने कुल वनक्षेत्रको करिब १८ प्रतिशत
आगामी आवको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको अपेक्षा
संविधानअनुसार सरकारले आव २०७९/८० को बजेट यही जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्दैछ । कोभिड–१९